"Maayar SOLTELCO Waxa uu Horumarkii Maxamuud Haybe U Xil-saaray Rag Budhcad Ah" Dhallinyarada Koonfurta Hargeysa | Somaliland One
"Maayar SOLTELCO Waxa uu Horumarkii Maxamuud Haybe U Xil-saaray Rag Budhcad Ah" Dhallinyarada Koonfurta Hargeysa
“Annaga oo ah barbaarta Degmada Maxamuud Haybe/Hargeysa ee ka shaqeeya danta guud sida caafimaadka, waxbarashada IWM waxay ahayd badhtamihii 2015ka markii uu Maayarka Caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco) lacag dhan $5000 ku wareejiyay ninka la yidhaahdo Mustafe Maxamed Daahir (Girgire), taas oo loogu tala-galay dayac-tirka Dugsiga Hoose/Dhexe ee Guryasamo.Isla maalintaa waxay Dawladda Hoose bixisay lacago kab u ahaa mashaariic kale oo Hargeysa ka socda.
Waxa ayaan-darro ah in lacagtaasi ay ka soo baxday dawladda hoose, isla markaana aanay gaadhin dugsigii iyo ardaydii wax loogu qaban lahaa. Saxaafadda iyo dadka Somaliland indhahooda ayay ku soo arki karaan dayaca ka muuqda iskuulka Guryosamo, Ninkaasi inta uu lacagtii danta guud qaatay ayuu xashka tegay. Markii uu soo laabtayna waxa uu sheegay in aanu wax adduun ah u haynnin dugsiga ee uu ku wareejiyay rag kale oo lacagtaa u adeegsaday dano gaar ah, sida Xildhibaan Weli Axmed Xaawa oo ka tirsan Golaha Wakiillada iyo nin kale oo Mustafe Muuse Cismaan (Ina Muuse Dalab) la yidhaahdo. Ninkan lacagta lunsaday waxa ay xigaal yihiin Cabdicasiis Maxamed Xaashi (Cagaweyne) oo ah maayar-ku-xigeenka caasimadda Hargeysa, waana ta aanu filaynno in uu maayarku ku amminay. Dhawr jeer oo aanu arrinka ka ergaynnay, wax jawaab ah maanu helin.”Annaga ayaa lacagtaas cunnay” ayay ragga qaar si badheedh ah u yidhaahdeen markii lala xisaabtay.
Haddaba waxa aanu Maayarka caasimadda ugu baaqaynnaa in uu hubiyo halka ay lacagtaasi martay. Waana in sharciga lala tiigsado ragga xoolihii ummadda u adeegsaday xeeladaha gaarka ah. Haddii kale waxa aanu Dawladda Hoose iyo raggaa iska dhigay inay metelaan Maxamuud Haybe u arkaynnaa shuraako u bahoobay hagardaamada ummadda. Mustafe-girgire nama metelo, waa ragga ragaadiyay Mashruuca Waddada Cad ee Sallaxlay iyo Guddiga beesha Hargeysa/Sallaxley. Caqliga ma geli karto in qaadhaan horumarineed lagu dhisto guryo, gawaadhina laga iibsado iyo in lacag xaaraan ah lagu tago magaalada barakaysan ee Maka.
Beryahan dambe waxa soo baxay rag gadh la baxay, oo ummadda ku boobaya khamiiska iyo cumaamadda. Waanu ka xunnahay falka uu sameeyay ninkaasi, haddii aan jawaab laga helin Dawladda Hoose ee Hargeysana waxa aanu samayn doonnaa bannaan-bax salmi ah oo aanu ku muujinaynno sida ay Dawladda Hoose u hagratay Maxamuud Haybe dhanka dhismaha garoonnada. Maayarku wuxuu dhisay garoonnada Xawaadle iyo Dhallinta Kacaanka oo xaafaddooda ah, wuxuu diiday dhismaha waddada isku xidha Madaarka iyo Caasimadda. Ma liqi karno caddaalad-darro iyo musuq-maasuq is-barkan oo nagu dhaca!”
Cabdiqani Ibraahin Cige
Cabdiqaaddir Siciid Warsame
Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye
Xuseen Xasan Muuse
Cabdiraxiin Yuusuf Nuur
Siciid Boodhle Xaaji Xasan
Yaxye Cismaan Maxamed
Cabdiqaaddir Haaruun Cabdalle
Tell 063 4179975